xalaada amni ee Soomaaliya oo ka soo reyneysa iyo mashruuc dib u celin oo la bilaabey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Foto: Farah Abdi Warsameh/Scanpix.
xalaada amni ee Soomaaliya oo ka soo reyneysa iyo mashruuc dib u celin oo la bilaabey
La daabacay fredag 1 mars 2013 kl 14.04
In ka badan 20-sanno kabacdii xaalada amaan ee Soomaaliya ayaa u eg in ay ka sooreyneyso. Qurbo joog badan oo Soomaaliyeed ayaa dalkii dib ugu noqoneysa kuwaas ka qayb qaadanaya dib u dhiska iyo maalgashiga dalka. Soomaalida reer Iswedhen ayaa kamid ah kuwo dib ugu noqonaya Soomaaliya. Cabdi dure waxa uu kamidyahay dadyowga dib u noqdey.
- Magaaladaan ku dhashay oo aan ka soo shaqeeyey ma la aqoon karo, gabi ahaanteed waa kabud, ayuu yeri Cabdi Duri oo Mogadishu gaari ku dhex wata halkaas oo uu horey uga soo cararey 20 sanno ka hor, kadib mudo 16 sanno ah oo uu ku noolaa xaafada Skjärholmen magaalada Stockholm ayuu kabacdii go’aansadey in uu dib ugu noqdo magaaladii uu ka soo jeedey, soo noqo shadiisaas oo aheyd afar sanno ka hor, maanta waa gudoomiya golaha ganacsiga ee Mogadishu.
Xaalada Amni ee ka soo reyneysa Soomaaliya ayaa keentey in ay kororto xiisaha gurba joogta u qabaan dib ugu noqoshada dalkoodii hooye, gaar ahaan qorbojoogta dalkaan Iswedhen. Saas darteed ayaa hada waxaa la qorsheynayaa in la hirgeliyo magaalada Hargeysa waqooyiga Soomaaliya xaafiisk mashruuc dib u noqosho iskeeda. Sidaas waxaa sheegtey Emina Krzovic oo ka howla gasha Stockholm Stad.
- Dadka waa ogyahiin in xaalada halkaa ka jirtaa aysan la mid aheyn mida halkaan ka jirta, way ogsoonyahiin in uu dhaqli qofka soo galaa uusan la mid aheyd kan halkaan laga qaato. Saas oo ay tahay dadka waxay doonayaan in ay dib u noqdaan sababo badan oo jira owgeed., ayey teri.
Mashruucaan oo ay hergelisey maamulka magaalada Stockholm ayaa la doonayaa in loo suurto geliyo dadka iskood u doonaya in dib ugu noqdaan Soomaaliya gaar ahaan qaybaha waqooyi dalkaas. 500 oo qof oo arintaan wax laga su’aaley ayey kalobar sheegen in ay xiiseynayaan. Hadana degmada Stockholm ayaa qorsheyneysa in ay ka furto xaafiis mashruucaan magaalada Hargeysa, kaaso o lacagta lagu qarash gareynayo ay bixineyso EU.
- Waxaan ku rajo weynahey in aan ku guuleysano furitaanka xaafiiskaan. Degmada Hergeysa arintaan si fiican bay u soo dhaweysey. Ayaga ayaa iska leh xafiiskan oo maalgelintiisa ley halka aan anagana gacan ka geysananeyo oo aan diyaarineyno dadka halkaan ka noqonaya oo magaaladaas u noqonaya, sidoo kale waxaan tababareynaa shaqaalaha xaafiiska, ayey tiri
Sannadkii hore 195 ruux oo ah Soomali Isweedhish ah ayaa sheegey in ay dib ugu guureen Soomaaliaya, halka 289 kale sheegeen in ay ka guureen Iswedhen ayaga oo aan sheegin halkey u guureen oo ay suurtogel tahay in ay dib ugu noqdeen Soomaaliaya sida uu aaminsanyahay xaafiiska dhexe ee tirkoobka. Intaas waxaa dheer 60 ruux oo ah Soomaaliada Iswedhen oo laga saarey diiwaanka, ayagana waxaa la maleynayaa dib ugu noqdeen Soomaaliaya. Waqti dheer ayey qaxootiga Soomaaliaya ka imaanaya soona gaaraya Iswedhen ahaayeen kaalinta sadexaad qaxootiga yimaada Iswedhen. Ali Haid 23 sanno ka hor ayaa ugu danbeysey Soomaalia waxuuna qorsheynayaa in uu xagaagan soo socda markii ugu horeysey booqasho ku tago si uu u soo indha indheeyo xaalada Soomaaliya. Ali waxuu aaminsayahay in waqtiyada soo socda qolqolka soomaalida dib u noqonneysa ay ka badnaan doonto qaxootiga dalkaas ka soo qulqulaya.